အသက် ၃၂ ​​- ပြင်းထန်သော ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ ပျော့ပျောင်းသောစိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားစေနိုင်သည် - Your Brain On Porn
အသက် ၃၂ ​​- ပြင်းထန်သော ED ကုသခြင်း၊
91 days ago ငါ NoFap စတင်ခဲ့သည်။ ငါစတင်ခဲ့ပြီးထိုနေ့ရက်သည် 16-နှစ်ပေါင်း-တည်တံ့ PMO-အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုငါ 32 အသက်အနှစ်ဖြစ်၏။ ငါ ED နှင့် PE ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသပေးဖို့ PMO အပေါ်မှာငါ့အချိန်ကိုဖြုန်းကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ပျော့စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ပျော့စိတ်ကျရောဂါကုသပေးဖို့ NoFap စတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်မစတင်နေရာအရပ်ဖြစ်၏: ငါ 14 နှစ်ပေါင်း ED နှင့် PE ခံစားနေရပြီးပါပြီ။ အကြှနျုပျ၏ ED အလွန်လေးနက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ Meds ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မရတဲ့ Viagra, မလိုဏ်ဂူ-ခန္ဓာကိုယ်-Auto-ဆေးထိုး။ တရားဝင်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို: သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်။ အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့အဘယ်သူမျှမကမျှော်လင့်ချက်။ အဆိုပါဆရာဝန်လိင်တံ-Prothesis အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်မျှော်လင့်ချက်စွန့်တော်မူ၏ဘူး။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးငါမြော်လင့်, ((အ dopamine အပေါ်အခြေခံပြီး !!!) - ရန် apomorphine) Viagra နှင့် Ixense ပေါင်းစပ်တဲ့တိုတောင်းသောအချိန်အနည်းဆုံးအချို့ဒီဂရီတစ်ခုစိုက်ထူစေ၏။
ငါ YBOP, dopamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းကိုဖတ်ပြီးသောအခါ, ငါသညျငါ့ရောဂါပျောက်ကင်းတွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းသိ!
ရက် 1 - ရက် 55
NoFap (HardMode) ၏ပထမဦးဆုံး7ရက်ပေါင်းငါ့အဘို့အလွန်ခက်ခဲခဲ့ကြပြီ။ တစ်ရက်7နောက်မှငါ flatline သို့ ဝင်. ကြောင့်သေသကဲ့သို့ငါ၏ဒစ်ခံစားရတယ်။ အဆိုပါ flatline နေ့က 24 သည်အထိကြာခဲ့သည်။ တစ်ရက် 24 ကတည်းကငါညစဉ်ညတိုင်းနှင့်နံနက်တိုင်းစိုက်ထူခဲ့သညျ။ ရော့ခ်-ခက်ခဲ! ကျွန်မထက်ပို 14 နှစ်ပေါင်းတွေ့ကြုံခံစားဘူးတစ်ခုခု! ငါအချို့ရက်အကြာတွင် hardmode ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လိင်စဉ်အတွင်းကျနော့်ရည်းစားကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့မှ လာ. , အအေးမိရေကူးကန်ထဲမှာ cuddling နေချိန်မှာကျွန်မ rockhard စိုက်ထူတယ် 13 ငါနေ့ရက်တွင် ... နောက်တဖန် 46 yo နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်! ထိုအချိန်မှစ. ငါ၏အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသတာဖြစ်ပါတယ် !!! နောက်တဖန် ... 14 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဆရာဝန်များငါ၏အလိုဏ်ဂူ-ခန္ဓာကိုယ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်တစ်ဦး prothesis သှငျးခငျြတ!
ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးပါ! သတ္တုတွင်းကဲ့သို့သောအလေးအနက် ED များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းလည်းမရှိလြှငျ, ဥစ္စာများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းလည်းရှိပါ! ကြိုးစားနေမစောင့်, ခိုင်ခံ့နေဖို့, Don Edge, မ fantasize ဘူး!
ရက် 55 - ရက် 91
နွေရာသီအားလပ်ရက်စိုးရိမ်စိတ်စဉ်အတွင်းကျောလာ၏။ ငါ7တစ်လ meds မပါဘဲခဲ့သညျ။ နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူရမ္မက်ပြန်ရောက်လာတယ်။ အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာ porn နှင့် edging အဘို့ထွင်းထုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသကဲ့သို့ပိုဆိုးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီတော့ NoFap ပိုကောင်းဖို့တစ်ခုခုပြောင်းလဲပြီရမယ်!
ဒါနဲ့ NoFap ဖြတ်ပြီးနောက်, လူမှုရေး၏ alot ပြီးနောက်, meds မပါဘဲ7တစ်လပြီးနောက်စိုးရိမ်စိတ်၏ခံစားခကျြအတှကျအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ဘာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့စတင် ... ထိုအခါငါသဘောပေါက်:
ဒါဟာအလေးအနက်စေတဲ့အားကစားတွေအများကြီး (စက်ဘီး၏ 40-80 မိုင်နှင့်တစ်ပတ်လျှင် running ၏ 12-15 မိုင်) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု (အလုပ်, လေ့လာမှုနှင့် freemasonslodge အတွက်ဒေသခံအစိုးရနှင့်အဖွဲ့ဝင်အတွက်ပါလီမန်ထိုင်ခုံ၏ 70 နာရီ) ခဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့ခြင်း,
တစ်ရက် 85 ကတည်းကငါမဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက် ယူ. အရာရာပိုကောင်းတယ်။ စီးပွားပျက်ကပ်သှားစိုးရိမ်စိတ်သှားကြွက်တက် သွား. ဦးနှောက်မြူ aaaand သို့သှားကွ၏ ... PE သို့သှားကွ၏ !!!
မဂ္ဂနီစီယမ်တိုင်းစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်တိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ထိုသို့လက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ လူတွေအများအပြားမဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းရှိသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်: ကော်ဖီ, ကိုကာကိုလာ, ရင်စိတ်ဖိစီးမှု, အားကစားနှင့် fapping ။ ဒီတစ်ခါလည်း Nofappers အများကြီးအချို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်တာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်! ကိုယ့်အကြောင်းမှာ google အပေါ်အချို့သောသုတေသနပြုပါ!
ငါတော့ဘူးကြောင်းအများကြီးအလွန်အကျွံအပြုအမူ (ဂိမ်းကစားခြင်း, အလုပ်လုပ်, သကြားလုံးစားခြင်း) မပြကြဘူး။ ငါသည်ငါ့အချိန် wisley ဖြုန်းလုပ်ပါ။ ငါသိပ်ကျန်းမာသန်စွမ်းကိုစားကြလော့။ ငါ 20 မိနစ်နေ့ရက်တိုင်း Zen-ဘာဝနာကျင့်သုံးနှင့်ငါ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်လမ်းညွှန်အခြေခံမူသှငျးဖို့လမ်းအဖြစ် autogenous လေ့ကျင့်ရေးသုံးပါ။ ငါသိမြင်မှုကုထုံးနှင့်လှုံ့ဆျောမှု (ညျဒါဝိဒျဃဘန်း, နပိုလီယံဟေးလ်, ယောလ Osteen) အကြောင်းကိုစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ပါ
ကောင်းပြီငါအမျိုးသမီးတွေဆီသို့ငါ၏အသဘောထားကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ရပါတယ်။ လူမှုရေးတွေအများကြီးပိုကောင်းနှင့် selfesteem တိုးတက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတကယ်ဤအရာများကိုနှင့်အတူပြဿနာများကိုမရှိခဲ့ဘူး, ဒါကြောင့်ငါအဘို့အအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကယခုတိုငျအောငျကိစ္စများခဲ့သူတွေကို, အများကြီးများအတွက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပြင်ပမှထိုအခွင့်အာဏာရဖို့မ, သိရန်အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့သညျအတှငျးရှိအိပ်ပျော်နေသောနေကြသည်။ သူတို့ကိုနိုးလော့!
TLDR; NoFap ပိုကောင်းအသက်ငါ၏အလမ်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ NoFap ငါအနာဂတ်စဉ်းစားလမ်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုအမှုအရာတွေအများကြီးဖို့ကျွန်မကိုပိုပြီးစပ်စုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ AND yeah ရဲ, NoFap ED ၏ 14 နှစ်ပေါင်းထဲကအကြှနျုပျကိုကုသပေးခဲ့၏။ ငါအာနိသင်နှင့်လိင်စွမ်းအင်ကနေစိမ်းဖြင့် Stallions နဲ့တူခံစား fucking ငါ!
အများကြီးဤကွီးစှာသောအသိုင်းအဝုိင်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျ fapstronauts နှင့် femstronauts မပါဘဲအစဉ်အမြဲငါ NoFap ၏တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ထက်ပိုမိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ဖူးဘူးလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LINK - ၉၁ ရက် - အလေးအနက်ထားသောကုသမှုခံထားရသော !!!